के तपाइँ आफ्नो घरको बैठक कोठा सुधार गर्न चाहानुहुन्छ? | सजाउनुहोस्
के तपाइँ आफ्नो घरको बैठक कोठा सुधार गर्न चाहानुहुन्छ?
सजाउनुहोस् | 14/07/2021 10:10 | सजावट, बहाली
त्यहाँ विकल्प को लागी धेरै कारणहरु छन् घरमा सुधार गर्नुहोस्। धेरै अवसरहरूमा, वितरण आफैंले के चाहान्छ भन्ने कुराको लागि फिट हुँदैन र यो उत्पन्न हुन्छ कि परिवर्तनहरूमा यसलाई अनुकूलन गर्न आवश्यक छ। अर्कोतर्फ, समय बित्दै जाँदा संरचनामा क्र्याक्स वा अन्य समस्याहरू देखा पर्न सक्छन् जुन सुधारको श्रृंखला बनाउँदछ।
जब तपाईं आफ्नो घरको केही अंश पुनःस्थापना गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ, तपाईं जहिले पनि उत्तम ग्यारेन्टीहरू र विश्वास गर्नुहुन्छ कि सबै कुरा ठीकठाक हुन्छ, यसका साथै बजेट चकित छैन। यस कारणका लागि तपाईको क्षेत्रका कम्पनीहरूका विभिन्न बजेटहरू परामर्श लिन सजिलो छ, जससँग तपाईं फाइनान्सिंगको सम्भावनामा पनि भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो तपाईंको अवस्था हो भने, तपाईं सक्नुहुन्छ यहाँ सुधार बजेटको लागि सोध्नुहोस् नि: शुल्क र कुनै बाध्यता बिना।
उत्तम विचारहरू तपाईको बैठक कोठा लाई देख्नको लागि
कुनै सुधार गर्नु अघि मुख्य कुरा हो हामी के चाहन्छौं भन्ने बारे कुनै न कुनै विचार छ। तपाईको आवश्यकता अनुसार राम्ररी परिवर्तन हुन चाहानु भएको कुरा जान्न, वा तपाईले चाहानु भएको शैली सम्भावित अप्रत्याशित घटनाहरू हुनबाट जोगिन आवश्यक छ।
यद्यपि त्यहाँ केहि परिवर्तनहरू छन् जुन कुनै पनि कोठाको उपस्थिति र कार्यक्षमतामा उल्लेखनीय सुधार गर्न सक्छ, जस्तै:
विन्डोज बदल्नुहोस्। यदि तपाईंको बैठक कोठा एकदम सानो छ भने ठूला विन्डोजहरू राख्ने प्रयास गर्नुहोस्, यसले अधिक प्रकाश र विशालपनको ठूलो अनुभूति गर्दछ। साथै, यदि तपाईं भित्ताहरू सेतो रंग्नुहुन्छ भने तपाईं प्राकृतिक प्रकाशलाई अझ बढी देखिने बनाउनुहुन्छ।
भुइँ परिवर्तन गर्नुहोस्। विशिष्ट स्ल्याबको सट्टामा हामी रंगाहरूमा प्लेटफर्मको लागि अप्ट इन गर्न सक्दछौं जस्तै अखरोट वा नरम रंगहरू अन्तरिक्षमा धेरै न्यानोपन थप्न। यसको स्थापना एकदम सरल छ र कोठामा अधिक सुन्दर रूप दिन्छ। अर्कोतर्फ, छत पनि एक उत्तम विकल्प हो किनभने तिनीहरू प्राकृतिक काठले बनेका छन्, यसलाई चमकदार र हेर्न सजिलो हुँदै।
यदि तपाईंसँग उच्च छत छ भने, एक राम्रो विकल्प हो बीम थप्नुहोस् कोठामा अधिक चरित्र र गर्मी दिन काठको रंगमा। यस तरीकाले तपाईं ठाउँको उचाईको फाइदा लिन सक्षम हुनुहुनेछ र तपाईं आयाम प्राप्त गर्नुहुनेछ। यदि तपाईं यसलाई अधिक आधुनिक टच दिन चाहनुहुन्छ भने, राम्रो विकल्प तिनीहरूलाई सेतो रंग्नु हुनेछ।
रंगहरूमा ध्यान दिनुहोस्। जे होस् सेतो भनेको कुनै कोठामा बढी प्रकाश ल्याउँदछ, यो पर्दा वा कुशन जस्ता सजावटी तत्त्वहरूको साथ र color्गको टच थप्न सुविधाजनक छ, तर टेबुल वा सोफा जस्ता फर्नीचर पनि। बस बैठक कोठामा चित्रण गरेर तपाईले आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुन्छ।
स्किर्टिंग बोर्डहरू बदल्नुहोस्। धेरै पटक तिनीहरू लगभग ध्यान नलगाईन्छन्, यद्यपि यो परिवर्तन हो जुन ठूलो प्रयास वा समयको आवश्यक पर्दैन। यो साधारण परिवर्तनको साथ तपाईं कुनै पनि कोठाको दृश्य आधुनिक बनाउन सक्नुहुन्छ।
अन्तमा, नबिर्सनुहोस् सजावट थप्नुहोस् तपाईंको नयाँ बैठक कोठाको शैली अनुसार। मुख्य परिवर्तन आर्म चेयरहरू प्रतिस्थापन गर्ने वा अझ आधुनिक कफी टेबल राख्नु हो किनभने ती कोठामा उनीहरूको ध्यान केन्द्रित भएका छन्।
थप रूपमा, सजावटकर्ताहरूको लागि राम्रो चाल जब एक कोठा redecorating गर्न एक डिजाइनर बत्ती थप्नुहोस् यसले पढ्ने कुनामा वा छतको लागि रोशन गर्दछ। र यदि तपाईंसँग खाली ठाउँ छ जुन तपाईंलाई के गर्ने थाहा छैन भने, विन्टेज मिरर वा कन्सोलमा क्यानभास राम्रो समाधान हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: मुख्य पृष्ठ » सजावट » के तपाइँ आफ्नो घरको बैठक कोठा सुधार गर्न चाहानुहुन्छ?
घरको कम छतका लागि कुन बत्तीहरू प्रयोग गर्ने